Guddida Doorashada iyo Hogaanka Kulmiye Oo Guurtida La Kulmay + Kulmiye Oo U Muuqda Inuu Damacsan Yahay Wakhti Dheeraad Ah | Duul News International
Guddida Doorashada iyo Hogaanka Kulmiye Oo Guurtida La Kulmay + Kulmiye Oo U Muuqda Inuu Damacsan Yahay Wakhti Dheeraad Ah	(Duulnews)-Guddida golaha guurtida Somaliland dhawaan u saaray inay lafo guraan muddo kordhin loo sameeyo Xukumadda Madaxweyne Siilaanyo, ayaa maanta kulamo la qaatay Guddida Komishanka doorashooyinka iyo Xisbiga Kulmiye, waxaana laga wada hadlay arrimaha muddo kordhinta.
Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame, ayaa ugu horayn sharaxay kulanka Guurtidu la yeelatay guddidooda “Maanta waxaa nalooga yeedhay Golaha guurtida, waxaana nala waydiinayay oo aanu xog waran ka yeelanaynay arrimaha jira ee soo socda ee diwaangalinta codbixiyeyaasha. Xog warankii waanu kala qaadanay, si wanaagsan baanu isku fahanay, anaga iyo guurtidana guul buu kulanku noogu dhamaaday” ayuu yidhi Mr Cabdiqaadir.
Dhanka kale waxaa kulan gaar ah la yeeshay Guddida guurtida Hogaanka sare ee Xisbiga Kulmiye, oo ay hogaaminayaan gudoomiyaha Xisbiga, kuxigeenka koowaad, xogyaha guud iyo xubno kale oo sarsare.
Gudoomiye xigeenka koowaad ee Kulmiye, Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed, oo saxaafadda la hadlay markii kulankaasi dhamaaday, ayaa sheegay inay guurtida u tixgalinayaan wakhtiga ay Xukumadda u kordhinayaan.
Xisbiga Kulmiye ayaa u muuqda mid u xusul duubaya muddo ka badan wakhtiga doorashada lagu darayo ee halka sanno ah, waxaanu ku dooday in arrimo badan hadhsan yihiin “Waxaanu guurtida u sheegnay inay doorashooyinka soo socda iyo hawl gudashadooda wakhti macquul ah oo doorashadu ku qabsoomi karto u qabtaan. Waxyaalaha aanu gaarka u tilmaamay waxaa ka mid ah doorashada haddu waa mid inagu cusub, waxaa la isa saaray doorashadii Madaxtooyada iyo tii wakiilada, sidaas darteed waxyaabaha dhiman waxaa kow ka ah Sharcigii lagu maamuli lahaa doorashada golaha wakiiladu ilaa hadda ma samaysna” ayuu yidhi Mujaahid Maxamed Kaahin.
Mujaahid Maxamed Kaahin, waxa uu sheegay inay Golaha guurtida u bandhigeen inay gutaan waajibkooda dastuuriga ah islamarkaana wakhti macquul ah u qabtaan doorashada. Waxa uu sheegay inay taageersan yihiin xaqa guurtidu u leedahay muddo kordhinta.
Xisbiga Kulmiye ayaa sidoo kale ku talinaya in Goleyaasha qaranku si taxadar leh uga baaraan degaan saami qaybsiga Mudaneyaasha wakiilada ee la soo dooranayo doorashada soo socota islamarkaana si fiican xeerkooda loogu qeexo habka iyo hanaanka loo kala yeelanayo.